Akhriso Go'aanka Maxkaamdda ICJ ee Dacwadda Badda - Awdinle Online
Akhriso Go’aanka Maxkaamdda ICJ ee Dacwadda Badda
Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadoo tallaabada Kenya ka jawaabeysa ay qoraal u gudbisay Maxkamadda, ayna ku caddaysay in ay diyaar u tahay in ay ka qeyb gasho dacwadda bilaabanaysa bisha March, oo aysan dooneyn dib u dhigis kale.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe ayaa Khamiistii ka sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Muqdisho in Soomaaliya ay diidan tahah codsiga Kenya ee ah in markii 4-aad dib loo dhigo dhagaysiga kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya labada dal.
“Waan diidnay codsigii 4-aad ee Kenya u gudbisay maxkamadda ICJ oo ahaa in dib loo dhigo dacwadda badda ee u dhexeeysa labada dal. Caddaaladda oo daahda, waa caddaaladda oo la diiday. Waa inaan tagno maxkamadda 15-ka March,” ayuu yiri wasiirku.
Previous articleMaxkamadda ICJ oo laashay dalabkii Kenya & dowladda Somalia oo ka hadashay
Next articleMeydadka Afar Ruux oo la helay & xog cusub oo laga helay